Yakanakisa YEMAHARA vhidhiyo mitambo yeGNU / Linux | Linux Vakapindwa muropa
Yakanakisa YEMAHARA vhidhiyo mitambo yeGNU / Linux
Kana iwe uchirangarira, isu tatoita imwe nyora nemitambo yakanakisa yemavhidhiyo yeLinux kwechinguva yakadzoka paLxA, yaive runyorwa runonakidza rweyese akanakisa emitambo yemavhidhiyo anga abuda uye ayo anogona kumhanyisa natively yeLinux. Nekudaro, panguva ino isu tichaenda kupa mufaro kuhupfumi hwako uye tiri kuenda kunonyora akanakisa emavhidhiyo mitambo anowanikwa kune ako aunofarira GNU / Linux kugovera asi zvachose MAHARA.
Ndokunge, runyorwa ne emahara emavhidhiyo mitambo zvinonyanya kufadza izvo isu zvatinogona kuwana kune chikuva cheiyo penguin. Hautendi here? Ndinokukurudzira kuti uone sarudzo yedu yatakugadzirira kuti ugone kupedza maawa uchinakidzwa nesystem yako usingashandise yuro imwe, nekuti zvese hazvizove kuita mirairo mune terminal, munyika yeLinux kune zvakare vatambi uye izvi ichave yako 15 yemahara emavhidhiyo mitambo yaunofarira:
Ini ndinokusiya iwe iyi link kwaunogona kuona mavhidhiyo, kutora, ruzivo uye kurodha pasi zvakananga:
dota 2: Ini ndinofunga ndiyo yakanakisa pane iyo rondedzero, wandinoda. Uye hazvisi zvangu chete, Dota 2 ndeimwe yemitambo yemavhidhiyo inozivikanwa kwazvo kunze uko kweLinux, kunyangwe iwe uchivaenzanisa nevakawanda vakabhadharwa. A mutambo wevhidhiyo mutambo unoda zvishoma mharidzo, nekuti inozivikanwa ... Zvirokwazvo, ndeye mahara kana iwe usiri kuda zvekuwedzera, nekuti pane yakabhadharwa vhezheni.
War Thunder- Yehondo yemotokari simulator yakaiswa muHondo Yenyika II, ndeyechokwadi kukutora iwe. Chinhu chakanakisa ndechekuti hauzorasikirwa nepeni yekuyedza ...
The Pirate: Caribbean Hunt: kana iwe uchida kunyepedzera kunge pirate, uyu ndiwo mutambo wako wevhidhiyo. Zita rekuremekedza kwauchararama zviitiko zvakawanda pamusoro pemakungwa makuru nezvikepe zvako, uchirwa nekuzvinetsa iwe mumakungwa.
Kubata Planet: Seizvo zita rayo rinoratidzira, iyo simulator yekuredza, iyo chete yekuredza simulator iripo uye ndeye mahara uye ndeye Linux. Zvinogona kunge zvisingaite kunge zvinonakidza kune vamwe, asi kana iwe uchida kudzora kudzora hove inogona kuve zita rakanaka.
Star Conflict: Sanganisa chiito uye kuenzanisa kwezvikepe munzvimbo yekunze, kwauchasangana nehondo dzakakomba mune zvisingazivikanwe uye zvine ramangwana nyika ...
Ubongo / OUT: mutambo wevhidhiyo unokwezva kune vanhu vasinganzwisisike, avo vanofarira zvekare. Iyo 2D chikuva vhidhiyo mutambo uyo uchakuyeuchidza iwe nezve vamwe kuti iwe wakanyatso kutamba pane zvekare zvinyaradzo ...
Hapasisina Kamuri mugehena: kana chinhu chako chiri gore, ropa, kutya, kutya mafirimu senge The Texas Chainsaw Massacre kana zombie mabhaisikopo, ipapo unogona kuzvifarira, sezvo iri yekupfura kurwisa zombies uko ropa richava riripo kwazvo.
Chakavanzika Maryo Makoronike: Kana iwe uchida Super Mario Bros uye yakasarudzika 2D papuratifomu mitambo yemavhidhiyo, saka iwe urikuda iyi.
Super Tux Kart: NdiNintendo's Super Mario Kart asi "tuxeado", sezvo protagonist asiri Mario, asi Tux wedu.
Tangi simba- Hondo yepamhepo yehondo yevhidhiyo mutambo waunogona kutamba mahara.
pingus: Kana iwe waifarira maLemmins, saka Pingus ndiwo mutambo waunofarira wakasununguka, nekuti pachinzvimbo chemavara epakutanga akagadziridzwa nemapenguin aunofanirwa kutungamira mumamishini akasiyana ...
Cayne tsime rezita rokutanga: Unogona kuwana iyi yemahara yekutyisa adventure muchitoro cheGOG, kunyangwe paine phuku rakabhadharwa rine zvimwe zvirimo uye zvimwe zvinhu zvaunofanira kubhadhara kana uchida kuzviwana.
Kutya Kwemaguta: kune avo vanofarira maFPS akawanda, nawo uchafanirwa kutarisana nevamwe mune yakachena CounterStrike maitiro.
0 AD- SaPingus, haisi yemahara chete asiwo yakavhurwa sosi. Musoro wezano iri munguva chaiyo.
Hedgewars- Kana iwe usingade iyo chaiyo yenguva nguva zano pamusoro uye sarudza Turn-based zano, wobva watamba Hedgewars.
Ini ndinofunga iri sarudzo yakanaka yeimwe yeakanakisa. Iwe unoziva chero mamwe emahara mazita aunoda? Wedzera iyo mu inotsananguraTichafara kunzwa mafungiro ako… Ndinovimba yashanda seyakajairwa uye iwe unoda seimwe yenyaya iyi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » chiutsi » Yakanakisa YEMAHARA vhidhiyo mitambo yeGNU / Linux
Iwe wakanganwa maviri echinyakare freeciv uye Crack kurwisa
Ini ndinofunga Open Arena inofanirwa kunge iri pane iyo runyorwa. MuLinux Mint vhezheni 19 "Tara", ini ndinoona kuti pane kusawirirana nemamwe makadhi emifananidzo.
Pindura kuna hernan
Kutenda nekuunganidzwa, Cave Nhau zvakare yemahara uye ndeyeLinux uye yakanaka kwazvo.
Ini ndozivawo Red Eclipse
Ubuntu 18.10 yave kuwanikwa kurodha pasi uye nekuisa
Iyo nyowani vhezheni yeElementary OS 5 Juno yakazoburitswa